Ajụjụ - Hebei Spring-Tex I / E Co., Ltd.
Ihe nkpuchi nkpuchi
Matarasị Kedo akwa
Quilted matarasị echebe
Oche Ohiri Isi
Linlọ nkwari akụ
AJ QJRE A NA-AJ FKARRE Ọtụtụ mgbe
Gịnị bụ gị ahịa?
Ọnụahịa anyị ga-agbanwe dabere na ọkọnọ na ihe ndị ọzọ dị n'ahịa. Anyị ga-ezitere gị ndepụta emelitere ọnụahịa mgbe ụlọ ọrụ gị kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ.
You nwere ọnụọgụ iwu kacha pere mpe?
Ee, anyị chọrọ iwu mba ụwa niile ka ịnwee nke kacha nta na-aga n’ihu. Ọ bụrụ n ’ị na - achọ iregharị mana na ọnụọgụ pere mpe nke ukwuu, anyị na - akwado ka ị lelee weebụsaịtị anyị
Nwere ike ịnye akwụkwọ ndị dị mkpa?
Ee, anyị nwere ike inye ọtụtụ akwụkwọ gụnyere Asambodo nke Analysis / Conformance; Insurance; Mmalite, na akwụkwọ mbupụ ndị ọzọ ebe achọrọ.
Kedu oge nkezi oge?
Maka ihe atụ, oge ndu bụ ihe dị ka ụbọchị 7. Maka imepụta oke, oge ndu bụ 20-30 ụbọchị mgbe ị natara ego nkwụnye ego. Oge ndu na-adị irè mgbe (1) anyị natara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere ihu ọma ikpeazụ maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge ndu anyị anaghị arụ ọrụ na oge ị ga - emechi, biko gafere ire gị maka ire ere gị. N'ọnọdụ niile, anyị ga-anwa igbo mkpa gị. Ọtụtụ mgbe anyị nwere ike ime ya.
Nwere ike ịkwụ ụgwọ na akaụntụ akụ anyị, Western Union ma ọ bụ PayPal:
30% nkwụnye ego tupu oge eruo, 70% itule megide otu B / L.
Gịnị bụ ngwaahịa akwụkwọ ikike?
Anyị na-akwado ihe anyị na ọrụ anyị. Nkwa anyị bụ maka afọ ojuju anyị na ngwaahịa anyị. Na ikike ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ ọdịbendị nke ụlọ ọrụ anyị iji dozie ma dozie nsogbu niile nke ndị ahịa na afọ ojuju onye ọ bụla
You na-ekwe nkwa nzipụ na nchekwa nke ngwaahịa?
Ee, anyị na-eji nkwakọ ngwaahịa mbupụ dị elu. Anyị na-ejikwa ngwongwo ihe ọghọm pụrụ iche maka ngwongwo dị egwu yana ndị na-ebugharị nchekwa nchekwa bara uru maka ihe na-ekpo ọkụ. Ngwunye ọkachamara na ihe ndị na-abụghị ọkọlọtọ nwere ike ịnweta ụgwọ ọzọ.
Kedu maka ụgwọ mbupu?
Ọnụahịa mbufe ahụ dabere n'ụzọ ị họọrọ iji nweta ngwaahịa. Express bụ ejikarị ndị kasị quickest kamakwa kasị oké ọnụ ụzọ. Site seafreight bụ ihe ngwọta kasịnụ maka nnukwu ego. Kpọmkwem ibu udu anyị nwere ike na-enye gị ma ọ bụrụ na anyị maara nkọwa nke ego, ibu na ụzọ. Biko kpọtụrụ anyị maka ịmatakwu ihe.
Tchọrọ iso anyị rụọ ọrụ?